Semalt Inogovana 5 Mazano Okurapa Data Kubva paIndaneti
Dhiyabhorosi haisi nguva dzose inooneka, asi iripo paIndaneti. Zvose zvemashoko anowanikwa mumitauro yakasiyana-siyana, zvichiita kuti zvive nyore kwatiri kuti tizvinzwisise uye zvose hazvigoni kuwanikwa muC CSV kana imwe faira. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvingava zvakaoma kuti iwe ushandise mashoko acho zvakanaka. Uyezve, haugoni kuisunganidza pamwe ne datasets uye kuongorora zviri pachena. Nokudaro, kudhonza deta ndiyo nzira chete yekuumba makopi muoneka uye inobudikana maitiro.
1. Shandisa Google Spreadsheets neGoogle Chrome
Zvakachengeteka kutaura kuti zvose Google Chrome neGoogle Spreadsheets dzinobatsira kudhonza dhigirii mumaminitsi mashanu chete, uye haufaniri kuisa chero kadhi chero ipi zvayo. Kuziva kurongeka kwewebsite yako ndiyo danho rokutanga rokutsvaga uye kushandisa data. Nzira iyo iri nyore yekuita iyo ndeyeInternet mutemo muGoogle Spreadsheets. Inoshanda semashiripiti uye inotsvaga webhusaiti yako yose pasina kukanganisa pahutano. Iwe unogona kushandisawo software iyo Chrome yakabatana uye inouya nehuwandu hwezvinhu.
2. Shandisa Scraperwiki kuti uve nemigumisiro yakanaka
Kana uchida kutsvaga deta yakaoma uye usina unyanzvi hwekugadzirira, unofanira kuedza Scraperwiki kuti uve nemigumisiro yakanaka. Inobatsira kutsvaga mapeji akasiyana eWebpedia uye mawebhusayithi ane simba uye kutora nzvimbo yose paDynamic yako mumaminitsi mashomanana. Ichi chishandiso chakakosha kutenga mari yako nenguva uye unova nechokwadi chekupa zvakanakisisa uye zvakajeka mhinduro. Scraperwiki ine mabasa akasiyana-siyana, akadai sewe unogona kunyora magwaro akasiyana, unogona kukumbira nyanzvi kuti inyore scrapers panzvimbo yako uye taura nevanhu ve Scraperwiki nemigumisiro yakanaka.
3. Kunzwisisa chimiro chekucheka
Zvakakoshawo kunzwisisa chimiro chechera. Zvizhinji zvezviputi zvinokanganisa zvikamu zvitatu zvakanyanya: mutsara wemapeji kuti ubve, nzvimbo yezvakagadzirirwa deta kuti ichengetedzwe se database, uye muchengeti kana muparisi anobatsira kuwedzera URL kumutsara.
4. Kunzwisisa kukosha kwekucheka:
Kugadzira inzira inzira yekubudisa nayo mavhidhiyo kubva pamapeji ewebhu, ma PDF, uye mamwe magwaro, zvichiita kuti zvigone kushandiswa uye zvinonzwisiswa kuti zviwedzere kushandiswa. Ndiyo imwe yenzira dzakakosha uye dzakanyanyisa dzaunokwanisa kushandisa kuti uunganidze uye ushandise deta. Chinhu chakanakisisa ndechokuti haufaniri kuva neunyanzvi hwekugadzira hurongwa hwekutsvaga deta kana uri kushandisa zvishandiso zvakadai saKimono uye kutumira. io.
5. Dzidza nzira yekuchera:
Unofanirwa kudzidza kudzika kana iwe uchida kubvisa tsvaga kubva pamapeji akasiyana ewebhu nguva dzose. Uyezve, unogona kuidzidza kana iwe uine ruzivo rwemashoko kuti ushamiswe uye unoda kuzvishandisa zvakare pawebsite yako. Kana iwe uchigamuchira mazano e-email nezvezvinhu zvinonakidza nemashandiro, iwe unogona kutsvaga uye kudzidza zvidzidzo zvaro. Ichokwadi kuti kuchera ibasa rakaoma rinoda mazano mashoma ekugadzira. Zvimwe web scraping zvishandiso hazvidi kuti iwe udzidze unyanzvi hwekugadzirira uye mitauro, zvinoreva kuti iwe unogona kuita mabasa ako pasina chero kodhi Source .